SIDA LOO CAANO CAANO: SHARAXAAD FAAHFAAHSAN - XOOLAHA
Ugu Weyn Ee Xoolaha
Noocyada caanaha lo'da ee helitaanka waxsoosaar caanaha oo sarreeya
Ku ilaalinta lo'da ee qoysku waa mid faa'iido leh, maxaa yeelay xayawaankani wuxuu ku farxi karaa qoyska oo idil waxtarka caanaha leh. Si kastaba ha noqotee, si ay u helaan waa muhiim maaha oo kaliya inaad ilaaliso oo aad quudiso xayawaankaaga, laakiin sidoo kale si fiican u caano.
Waxay u muuqan lahayd - arrin sahlan, laakiin xaddiga caanaha iyo xaaladda guud ee jidhka lo'da ayaa aad ugu tiirsan farsamooyinka caanaha.
Waxaa muhiim ah ma aha oo kaliya in la qabsado dabiiciga ah ee xayawaanka, laakiin sidoo kale in ay u gaarka ah ee candho xoolo, xaddiga caanaha in lo'da awood u leeyihiin in ay bixiyaan.
Dabcan, caanaannada khibrada leh ayaa sidoo kale ogtahay siyaabo kala duwan oo lagu kordhin karo wax-soo-saarka caanaha iyo tayada caanaha soo saarey, taas oo aan ku farxi doonno in aan idinla wadaagno maqaalka hoose.
Waxaan diyaarinay oo kaliya nafteena, laakiin sidoo kale diyaariso lo'da ee geedi socodka iibinta
Ka hor intaanad bilaabin habka caanaha lo'da, waa muhiim inaad ilaaliso nadaafadda.
Talaabada koowaad waa in la nadiifiyo dhagta - digada cusub waa in la nadiifiyaa, halkii, caws engegan oo qallafsan ayaa la dhigaa (sawirka sidoo kale waa suurtogal).
Marka labaad, waxaa muhiim ah in daadku maro hawo ka hor. Xilliga xagaaga, marka ay jiraan cayayaanka badan oo kala duwan, waa arrin aad u muhiim ah ka hor inta aan la iibin iyo inta lagu jiro si loo xiro albaabka udoonkiisa. Tani waxay yarayn doontaa dhaqdhaqaaqa duqsigu, iyo lo'da kuma fidi doonto daboolka si aad u xoogan.
Tailing ee dabada ayaa sidoo kale caawisaa, inkasta oo xayawaanka aan ka takhalusi xiiso dareemayaasha.
Kabaha yaryar iyo dabeecadda ayaa si fiican ugu xiran, sababtoo ah waxay ku garaaci karaan baaldi baahi leh oo ku shub caanaha dhulka, ugu fiican - qashinka ku tuur. Hase yeeshee, lo'da ayaa loo adeegsadaa si dhakhso ah, waqti ka dibna waxaa loo isticmaali doonaa waqti isku mid ah si ay u noqdaan kuwo raaxo leh in la iibsado iyo in ay u dhaqmaan si xushmad leh inta lagu jiro habkan.
Caano bixiyayaasha khibrad leh waxay si aad ah uula talinayaan inay daaweeyaan xayawaanka, iyagoo isku dayaya in ay sii wadaan xiriirka "saaxiibtinimo".
Si loo yareeyo lo'da ka timaadda cadaadiska, waxaa lagula talinayaa in ay ka sii darayso ka hor intaanad bilaabin caanaha, naaneyska, iyo isaga oo la jilicsan. Xaqiiqdu waxay tahay lo'da ayaa awood u leh inay xasuusato milkiilaha si aad u wanaagsanmaxaa yeelay waxay dadku u aqoonsaneysaa urin, oo ka jawaab celisa naxariisteeda.
Xitaa waxyaabo aan macquul ahayn waxay dhacaan marka lo'da siinayso caanaha oo kaliya hal qof oo qofkisa caadaystay.
Ha ilaawin dhaq gacmahaaga ka hor inta aanad wax cunin, ku rid dhar nadiif ah ama ugu yaraan dufan. Sidoo kale, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u dhaqdo candhuufta, ka saarida dhammaan wasakhda ka soo baxa.
Si aad u dhaqdo candhuufaha waxaa fiican in la isticmaalo biyo diirran si aaney u xanaaqin lo'da. Ka dib, candho xoolo ayaa lagu tirtiraa qalalan.
Si aad u kiciso dhalidda caanaha lo'da, waa muhiim udder pre-massage. Waa in ay ku jiraan naqshad iyo naqshad, iyo ma aha oo keliya ibta, laakiin gebi ahaanba candhuufta. Sidaa darteed, lo'daada caanuhu waxay sameysmi doonaan nuugid naas-nuujin, caanaha caanaha naaska ayaa si weyn u kordhaya.
Noocyada nidaamka caanaha: farsamooyinka ugu muhiimsan iyo talooyinka wax ku oolka ah
Waxaa ugufiican caanaha lo'da fadhiya kursiga hoose, ka dib marka caano ka badan oo lo'da siinayo, mudada dheer ee habka caano bixintu noqon doonto.
Si aad u qaadato caanaha waxaad u baahan tahay inaad qaaddo waxoogaa - baaldi balaadhan ama duugo gaar ah. Fadlan ogsoonow in ka dib mar kasta oo la iibiyo, markabka loo isticmaalo caanaha wuxuu u baahan doonaa in la dhaqo oo la qalajiyo. Ka dib marka lo'da la caano dhigo, caanaha ayaa u baahan doona in lagu daboolo dabool ama faashad si aysan qashin u gelin.
Waxaad ku dabooli kartaa ibta naaska inta lagu siinayo laba siyaabood - oo leh laba farood, ama feero. Inkasta oo dad badan, oo faraha la qabsanayaan ay tahay habka ugu habboon (gaar ahaan haddii ibta lo'da ay yar yihiin), laakiin khubarada ayaa aaminsan in caanaha noocaas ahi ay u horseedi karaan dhibaatooyin kala duwan oo leh candho xoolo.
Sababtan awgeed, marka caanaha nuugaya waxay u baahan yihiin inay ku duubaan faraha oo dhan, oo ah, oo leh feero. Si aan u xoqin maqaarka gacmahaaga iyo maqaarka ibta ee lo'da, ka hor intaanad wax cunin, gacmahaaga xoqin oo waxaad ku cadaydaa saliid.
Sharaxaada caanaha lo'da
Kalluunku wuxuu u baahan yahay in la isku maro isla markaaba labada gacmood. Marka hore waxay soo saartey laba neef oo hore, ka dibna iyaga horayba laba caruur ah. Baaldiga waxaa la dhigayaa dabaqa hoose ee candhuufta, waxaa sidoo kale lagu xiri karaa cagaha, si aysan shil ahaan u leexin ama aan la garaacin by lo'da.
Waxaanu fulinaa caanaha:
Ku dabool gacmaha labadaba gacmahana ku cadaadi dhamaan farahaaga. Buraashu waa mid taagan, laakiin waxaan faraha u qaadeynaa si yar oo hoose, sida haddii aan ku jiido naaska.
Iyada oo ibta naaska waa in ay cufan tahay caano, ku dhuftey dyke, wax yar oo aan faraha u qaadin faraha iyo marwo laabta, ku celi ficilka lagu sharraxay. Waxyaabaha ugu muhiimsani ma aha in la jiido naasaha si adag oo adag.
Caadi ahaan labada koowaad ee caanaha ee caanaha ayaa lagu qubeyaa baaquli gaar ah. Marka la eego xaaladda caanaha la soo saaray, waxaa lagu go'aamiyaa in xayawaanku leeyahay cuduro.
Sidoo kale, wasakhda ayaa ka soo baxda caanaha ugu horreeya ee ka yimaada ibta.
U hubso in aad u hoggaansameysid caanaha kale ee caanaha, markaad marka hore soo saartid ibtaada hore, ka dibna dib. Waxay u guurtaa midba midka kale iyada oo caanaha caanuhu ay daalan yihiin.
Waxaad si joogto ah u duubi kartaa candho xoolo, sidaas darteed qaybo cusub oo caano ah ayaa lagu dari doonaa ibta.
Waxaa si gaar ah muhiim u ah in la sameeyo massage ka hor dhammaystirka caano, ka dibna caanuhu waxay daadin doonaan dufan.
Marka la buuxiyo naas nuugista, waa muhiim in la tirtiro qalalan, ka dibna saliid walax sheyaal leh - saliida jelly ama subag. Tani waxay ka ilaalin doontaa ibta niqiyaadka ka soo jeeda xilli kulul.
Immisa jeer waa in caannoolajir la sameeyo: la baro fursado iyo aragtiyo kala duwan
Inta badan caanaha lo'da waxaa la sameeyaa saddex jeer maalintii.
Si kastaba ha noqotee, beeraha qaarkood oo xayawaankoodu ku wareegsan yihiin saacad kasta oo aanad isticmaalin quudin dheeraad ah, marka laga reebo caws, si ay u quudiyaan lo'da leh hal mar oo wax lagu iibiyo.
Hase yeeshee arrintan waxaa loo sameeyaa sababo dhaqaale, iyo sidoo kale xaqiiqda ah in xaaladahaas oo kale, sacadu caadi ahaan waxay soo saaraan qadar yar oo caano ah.
Laakiin weli, haddii lo'da ay awoodo in ay soo saarto qadar badan oo caano ah, ka dibna hal mar oo wax lagu iibiyo kuma habboona iyada. Laakiin mustaqbalka, fikradaha iyo caano bixinta, iyo xirfadlayaasha kale ayaa aad u badan.
Qaarkood waxay u maleynayaan in saddexda jeer maalintii ay kordhiyaan dhalidda caanaha, qaar kalana waxay qabaan fikradda in tirada caano-celintu aysan saameynin qadarka caanaha la soo saaray.
Malaha, waxay noqon kartaa mid sax ah in la yiraahdo haddii lo'da marka hore la caano saddex jeer maalintii, ka dibna loo beddelo laba jeer maalintii, ka dibna xaaladdan oo kale ah dhibcaha caanuhu waxay u badnaan doontaa.
Sidaa darteed, arrintani waa in loo soo dhawaadaa iyada oo ku saleysan awooddeeda. Haddii aysan kugu adkaanin waxaadna haysataa wakhti ku filan inaad caanahaaga ku cabto saddex jeer maalintii, samee saddex jeer.
Haddii maalintiiba aad mashquul tahay, oo ay kugu habboon tahay in aad qaadatid caanaha oo keliya subaxda iyo fiidkii - waa inaad bixisaa mudnaanta laba jeer caano.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan digaaga doofaarka.
Miyuu muhiim u yahay in la tixgeliyo wakhtiga caanaha lo'da iyo sida ay tani u saamaynayso qadarka caanaha?
Waqtiga caanaha waa inuu had iyo jeer isku mid noqdo.
Ugu horreyn, adigoo adeegsanaya arrintan waxaad adigu edbineysaa lo'daada, iyo marka labaad, waxay habeeyaan hababka caanaha caanaha ee candho xoolo.
Xaqiiqdu waxay tahay in caanaha badani ay ku urursan yihiin, iyadoo si sii kordheysa loo soo saaro. Hase yeeshee, ka dib marka la sifeeyo iyo qarxo inta lagu jiro duugisteeda, qanjidhada mammary ee lo'da ayaa la hawlgeliyaa, caanaha mar kale waxay bilaabaan inay si firfircoon u soo saaraan.
Haddii aad go'aansato inaad caanahaaga u caano saddex jeer maalintii, ka dib Inta u dhaxeysa laba caano ayaa ah qiyaastii 8 saacadood. Taasi waa, caannaanta waa inay bilaabataa qiyaastii 6:00 am, 12:00 duhurnimo iyo 7:00 galabnimo habeenkii.
Laakiin laba goor muddadani waxa lagu talinayaa in la kordhiyo ilaa 12 saacadood. Sidaa darteed, haddii lo'da la subaxdii subaxdii at 6:00, fiidkii waa in la bilaabaa 18:00. Hase yeeshee, waxaa muhiim ah in la ilaaliyo mudada u dhaxeysa caano, laakiin waa in la raaco qiyaastii isla waqtigaas.
Xitaa haddii muddooyinka loo cayimay ay adag tahay in la joogteeyo, caano-badinta waxaa la sameyn karaa saacad ka hor wakhtiga caadiga ah, ama saacad kadib. Taasi waa, haddii aad sida caadiga ah caano saddex jeer maalintii, markaa ugu yaraanta u dhexeeya caano ayaa noqon kara mudo ah 7 saacadood, iyo ugu badnaan - 9.
Qaar badani waxay sidoo kale isku darsadaan wakhtiga ku-meerashada iyada oo la siinayo quudinta. Xaqiiqdii, waa mid aad u habboon, sababtoo ah maahan inaad u tagto barnarka marar badan, marka hore in la quudiyo kadibna caano lo'da.
Dhibaatooyinka iyo cudurrada lo'da ee la xiriira candho xoolo iyo sifooyinka tayada caanaha
In lo'da waxaa jira laba ka mid ah cudurrada ugu caansan iyo dhibaatooyinka ee saameeya qanjidhada naasaha oo si weyn u saameeya tayada caanaha la soo saaray. Sidaa darteed, haddii aad go'aansato inaad ilaaliso lo'da, waxaad u baahan tahay inaad u diyaargarowdo waxaas.
Waa maxay leukemia-ka khatarta ah iyo sida loo fahmo calaamadaha cudurka?
Caabuqa leetemia Caanahaaga siyaabo badan ayaa loo heli karaa. Inta badan tani waxay dhacdaa marka dhakhaatiirtu ay qabtaan shaqooyin kala duwan oo la xiriira ururinta dhiigga ee xayawaanka. Laakiin marka laga reebo dhiig, walxaha keena ee leukemia waxaa sidoo kale laga heli karaa shahwada, caanaha, iyo sidoo kale dheecaanka amniotic (taas oo ah, cudurka waxaa laga qaadaa hooyada ilaa kubka).
Xayawaanka xayawaanka ah ayaa aad muhiim u ah in la xaddido marka lala xiriiro daaqa oo dhan., sababtoo ah cudurka la tilmaamay ayaa xitaa la isugu gudbiyo xasharaadka dhiig-nuugista. Nooca kale ee xun ee cudurku waa inuu yahay mid aan suurtogal ahayn in la ogaado jiritaanka cudurka ee marxaladda koowaad.
Haa, iyo ma jiraan calaamado muuqda oo ku saabsan tan labaad, cudurku waxa go'aaminaya isbeddelada dhiigbaxa ee ku dhaca nidaamka wareegga wareegga.
Maadaama maadadaha loo yaqaan 'leukemia' laga helo caanaha, looma qaadi karo cusub, markaa waa in si wanaagsan loo kariyaa ka hor.
Nasiib darro laakiin leukemia looma daaweyn karo. Qiyaasta kaliya ee lagama-maarmaanka ah ee lagama-maarmaanka u ah waa baaritaanka dhiigga ee laba-jeer ee xayawaanka ee joogitaanka cudurka.
Sidaa daraadeed, haddii loo baahdo, waxaad si ku-meel-gaar ah u baran kartaa cudurka oo aad ku dabaqi kartaa tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee go'doominta ama burburinta xoolaha.
Mastitis: calaamadaha, ka hortagga iyo daaweynta cudurka ee lo'da?
Cudurkaan waxaa lagu ogaan karaa isla markiiba by qanjirada caanaha oo sareysa ee lo'da. Badanaa dareenka isaga fiiri markaad wax iibsaneyso.
Sababaha Mastitis Waxaa laga yaabaa inay jiraan waxyaabahan soo socda:
Xaaladaha aan sharciga lahayn ee xabsiga, marka candhuuftu aanay si fiican u maydhin ama aysan nadiifin dhammaanba ka hor intaan la siin; iyada oo maqnaanshaha joogtada ah ee loo yaqaanno lo'da.
Inta lagu jiro xilliyada kulaylaha marka caanuhu istaagaan candho xoolo. Inta badan inta lagu jiro muddada qalalan ee waqtiga, naaso ayaa muujiya lafteeda sababtoo ah xaqiiqda ah in aan la daaweyn kahor.
Iyada oo cudurada catarrhal ee xayawaanka, marka ay leedahay heerkulka sare muddo dheer.
Iyada oo caanaha aan habooneyn.
Sidaa awgeed, ka hortagga naaso ayaa noqon karta quudin buuxda, iyo sidoo kale u hoggaansanaanta heerarka nadaafadda ee loo baahan yahay in la ilaaliyo lo'da.
Marka lafdhabarta, ma jirto wax caan u ah in loo isticmaalo qalab gaar ah.
Waxaad xakameyn kartaa naaso-xinjireedka ku jira caanaha, malax, iyo mararka qaarkood calaamadaha dhiigga. Si kastaba ha ahaatee, cudurkan sidoo kale wuxuu leeyahay qaab qarsoodi ah, marka jiritaanka xayawaanka waxaa lagu go'aamiyaa oo kaliya saldhigyo gaar ah.
Tusaale ahaan, waxaad ku dari kartaa daroogada Mastidine dhawr dhibcood oo caano ah. Haddii uu jiro cudur, caanuhu waxay u egtahay jelly iyo daaweynta lo'da waa in si deg deg ah loo bilaabo.
Isticmaalka ugu fiican ee antibiyootigga, inkastoo ay jiraan habab badan oo dhaqameed.
Maadaama mastitis ay sababi karto noocyada kala duwan ee bakteeriyada, laakiin daroogada waa in sidoo kale loo maamulaa si gooni ah. Si loo go'aamiyo nooca antibiyootigga ah ee waxtar leh, waa lagama maarmaan sii caanaha lo'da si loo falanqeeyo ee shaybaarka gaarka ah ee caafimaadka xoolaha.
Khubarada ayaa hubinaya in ay kugula taliyaan in xayawaanku si dhab ah u bogsiiyo. Waa suurtogal in la daaweeyo lo'da iyada oo aan daryeelaha, kaliya by helitaanka tilmaamo faahfaahsan isaga ka.
Siyaabaha iyo siraha si loo hagaajiyo soo-saarka caanaha
Qadarka caanaha la soo saaro xilliga caanuhu wuxuu si toos ah ugu xiran yahay sida iyo waxa lo'da cuno. Waxaa si gaar ah muhiim u ah in ay fiiro gaar ah u yeelato qodobkan inta lagu jiro mudada maqaarka qalalan iyo saddexda bilood ee ugu horreeya ka dib dhalmada.
Aad bay muhiim u tahay in cuntada la isku daro xayawaanku ay siiso tamar badan oo si fudud loogu nuugo jidhka oo ka soo jeeda kareemka, fitamiinada iyo macdanta, dufanka iyo borotiinka.
Sidaa darteed, marka lagu daro quudinta tayada sare leh inta lagu jiro mudadaas, waxaa muhiim ah in la siiyo lo'da dhirta kala duwan iyo fitamiinada dheeraadka ah.
Waxaan mar hore soo sheegnay sida ay muhiim u tahay in la sameeyo tababarka hordhaca ah ka hor inta aan la iibin. Masaxyada iyo dareenka lo'da ayaa sidoo kale saameynaya qadarka caanaha soo saaray.
Aad bay muhiim u tahay in lo'da ay caafimaad qabato. Sidoo kale, marnaba ma'aha lagama maarmaan in xayawaanku ku adkaysto walaaca, sababtoo ah dhalidda caanaha noocan oo kale ayaa dhici karta waqtiyada qaarkood.
Tayada caanaha: kala hadal wax ku oolka iyo saameyn xun?
Halabuurka iyo sifooyinka caanuhu way badali karaan, mar walbana ma sheegi doonaan wax xun.
Tusaale ahaan, arrimo kala duwan oo kala duwan iyo isbeddeladaas ayaa loo saari karaa:
Beerka lo'da, iyo sidoo kale da'deeda. Waxaa jira noocyo caanood oo badan oo bixiya caano badan oo caano ah. Iyada oo da'da, dhalidda, caanaha iyo tayada tayada ayaa hoos u dhaca
Xilliga nuujinta ee xayawaanku ku yaal.
Noocyada cunto ee lo'da, iyo sidoo kale dayactirka.
Heerka wax soo saarka.
Noocyada iyo joogteynta caanaha.
Sidaas awgeed, muddada nuujinta, taas oo ah, ilaa 300 maalmood, caanaha lo'da isku mid ayaa beddeli kara hantidiisa saddex jeer. Gaar ahaan, saxda ah ka dib dhalmada, ma helno caano, laakiin dambarka, kaas oo ka tagaya candho xoolo ah 5-7 maalmood ee hore.
Wakhtiga ugu dheer, waxaanu helnaa caano joogto ah, taas oo 10-15 maalmood ka hor dhalmada la beddelo by jir-koray, dhadhan qadhaadh.
Waxyaabo kale oo muhiim ah oo caanaha lo'da ah waa subag dufan ah. Maanta, khabiirada ayaa ugu yeeraya shuruudaha ugu muhiimsan ee muuqaalka dufanku ku badan yahay ee caanaha, qadarka borotiinka ee lo'da ka heleyso cuntada.
Sidoo kale, baruurta waxay kordhineysaa da'da lo'da, inkastoo 6 sano ka dib ay si tartiib tartiib ah u bilaabmayso.
Sidoo kale, falanqaynta kiimikada ee isugeynta caanaha ayaa inta badan go'aaminaya macnaha sonkorta caanaha. Dhadiska caanaha tooska ah wuxuu ku xiran yahay qaybtan. Si kastaba ha ahaatee, waa wax aan suurtagal ahayn in wax laga beddelo isbedelka, tan iyo sonkorta caanuhu waa had iyo jeer heer isku mid ah Iyadoo aan loo eegin tirada sanadka ee nuujinta.
Marka la eego cuntooyinka lo'da, aad u badan waxaad siin doontaa quudin ku jirta bakteeriyada, caanaha dufanka ayaa noqon doona. Proteins, taas oo ah borotiinno, ayaa sidoo kale heli doona isugeynta caanaha. Quudinta noocaas ah waxay kordhi kartaa dhalidda iyo caanaha, iyaga oo kor u qaadaya 10%.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Xoolaha 2020